KUTHENI UFANELE UBATHANDE ABANTU UBATHIYILEYO - UNXIBELELWANO
Kutheni Ufanele Ubathande Abantu Ubathiyileyo
Ukuba mna nawe sinengcinga enye yobundlobongela okanye inzondo ngokuchasene nabani na emhlabeni ngalo mzuzu, sinegalelo ekonzakalisweni kwehlabathi… UDeakak Chopra
Kulungile, ke kunokuba nobunzima ekukholelweni ukuba inzondo yakho iyabenzakalisa abantu e-Australia, kodwa kukho inyani ebuhlungu ngawe-intiyo yakho iyakukhathaza.
Ngaba ufumanisa ukuba ubathiyile abantu?
Mhlawumbi u-stepister wakho wonakalise isidlo sakho sokuzalwa; umhlobo wakho osenyongweni wamanga isithandwa sakho; kwaye umntu otya naye isidlo sasemini nayo yonke imihla uye wazimela emva komqolo wakho ukuze ufumane ukunyuselwa obulandelayo emgceni.
Iinyanga ezimbalwa zihamba, kwaye ucinga ukuba ungaphaya kwayo kude kube yi-BAM! Nanko emi emgceni emva kwakho njengoko uhlawula i-caramel macchiato yakho. Ufuna ukuphuma emnyango kwaye ngempazamo uchithe ikofu yakho eshushu kuye. Wenza ngathi awumboni, kwaye emva koko wenze umgca wendlela yokuphuma ekufutshane.Intengiso
Yintoni elandelayo? Ushiywe kukukhathazeka kwamathumbu, ukukhathazeka kwentliziyo.
Umntu othile wenze into ecekisekayo, embi okanye ekhohlakeleyo kuwe, kwaye ngoku uyamthiya ngenxa yayo. Unyanisile ngokuqinisekileyo. Into abayenzileyo ibingalunganga kodwa ukuzonda akulunganga kuwe. Ayisiyampilo kwaye awukwazi ukonwaba de uyilahle (inzondo yakho, hayi imoto yomnye umntu).
Abantu bayakukhathaza. Yinyani yobomi. Nokuba kungabom okanye kungenanjongo, iintlungu zihlala. Ngokwesiqhelo oko ukwenzakala kujika kube yintiyo . Nazi ezinye izizathu zokuyeka ukuzonda kwaye uqale ukuthanda.
1. Xa umthiyile omnye umntu, uyazicaphukela
ngokuvumela le demon ukuba ihlale ngaphakathi kuwe. Kude kube nini ufuna ukubambelela kolo luvo lungonwabisiyo?Intengiso
Mbini. Ukuthanda kwakhona, umelwe kukuxolela.
Ukuba awukwenzi oko, uhlala ejele kwixesha elidlulileyo ongakwaziyo ukonwabela okwangoku. Utshabalalisa amathuba akho okuthandana kwakhona, ukunyuselwa kwakho okulandelayo, kunye nesidlo sakusasa esinoxolo.
3. Ukubacaphukela abanye kukwenza uzive ungumntu ombi.
Okumangalisayo kukuba, ukuba ubambelela kwintiyo, uqala ukuziva ngathi ungumenzi wobubi. Ngaphambi kokuba wazi ukuba uphefumla umlilo endaweni yamagama, amazinyo akho ayabonisa, iinzipho zakho ziyaphuma, kwaye ubuso bakho bujikeleze iimilo ezijijekileyo. Ngubani okhohlakeleyo ngoku?
4. Intiyo yingxaki yobuqu ethi ibe yingxaki yehlabathi.
Khawufane ucinge ukuba wonke umntu ubambelele kwintiyo yakhe, ingakanani intiyo ebiyakubakho kwihlabathi.
3. Ukufunda ukuthanda umntu omthiyileyo luvavanyo lokwenyani lwesimilo.
Zibonise ukuba umkhulu kangakanani!Intengiso
Indlela yokuthanda abantu obathiyileyo
1. Khangela isifundo.
Isiganeko ngasinye esenzakalisayo sinesifundo esinamandla sokukufundisa.
Khupha iintlungu zangaphambili. Vula intliziyo yakho kwaye ufunde ukuthanda kwakhona.
3. Zithande ngaphezu kokuba ubathiye abanye.
Endaweni yokujonga ukuba unomsindo, wenzakalise kwaye unenzondo kangakanani, yima kancinci, emva koko uqaphele indlela ozenzakalisa ngayo ngokuvumela ezi mvakalelo zimbi zihlale ngaphakathi kuwe.
Ukuthanda umntu omthiyileyo yenye yezona zinto zinzima ukuzenza .Intengiso
Kodwa xa ujongene neenyaniso, akukho sizathu sivakalayo sokugcina loo mvakalelo imbi ngaphakathi kuwe, kunye nezizathu ezininzi zokuyishiya. Kholelwa kuwe; ungayenza. Ukulala ngaphakathi ngaphakathi kwakho kukufumana amandla amakhulu okufezekisa olu vavanyo lokwenyani lomlingiswa.
Kuphela kuxa ukhululekile kulo mthwalo, apho ungaqala khona ukuphila ubomi obonwabisayo.
Ubumnyama abunakubukhupha ubumnyama; kukukhanya kuphela okunokwenza oko. Inzondo ayinako gxotha intiyo; luthando kuphela olunokwenza oko. - UMartin Luther King, Omnci.
iikowuti malunga nokulahleka nokudideka
indlela yokunciphisa umzimba kwiiveki ezi-2
imibuzo enzulu yokubuza iqabane
Ukuxhatshazwa ngamazwi kubudlelwane
ubuza njani umntu obhinqileyo
Eyona ndlela yokukhulisa iinwele
hlala iikhamera emakhayeni abantu
Ubomi Obunokubakho Sebenza Imac Impilo Yengqondo Umkhwa